မာသဝါရှင်တန် , အမေရိကားရဲ့ပထမဦးဆုံးသမ္မတ၏ဇနီး, သမ္မတ၏ဇနီးလူမှုဖြစ်ရပ်များများအတွက်အိမ်ရှင်မအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နှင့်တစ်ဦးအလွန်အများပြည်သူအခန်းကဏ္ဍရှိခြင်း၏ထုံးစံတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟူသောဝေါဟာရကို Dolley Madison အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်အထိသမ္မတ၏ဇနီး "သမ္မတကတော်" ဟုခေါ်မခံခဲ့ရပေမယ့်
သို့သော် Woodrow Wilson ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းအပြီး, သောမော်ဒယ်ခဲ့သည်တိုင်အောင်, ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ဘဝထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်လောက်။
ဒီနေရာတွင်စည်းမျဉ်း "အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မအဖြစ်သမ္မတ၏ဇနီးက" တချို့ချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ လေးဆယ်ငါးယောက်သမ္မတပြီးနောက်ကြောင့်အနည်းငယ်ကိုလည်းအိမ်ဖြူတော်ရုံးခန်းနဲ့သမ္မတကတော်၏အပြည့်အဝခေတ်သစ်အခန်းကဏ္ဍတာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်အချို့သောအရာရှိတဦးကသို့မဟုတ်တရားမဝင်ကြလျှင်ပင်, တစ်ဦးကသမ္မတတစ်ဦး၏သမီးအိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရှိသည်မယ်လို့ဒါမှမမျှော်လင့်ဘဲမဖြစ်သင့် သူမတစ်ဦးကသမ္မတအကြံပေးကြောင်းမျှော်လင့်ချက်။
မာသ (Patsy) ဂျက်ဖာဆန် Randolph
သူက 1801 ကနေ 1809. ဖို့သမ္မတအခါသောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်ကသူ၏ဇနီးတစ်မုဆိုးဖိုခဲ့သည် မာသ Wayles Skelton ဂျက်ဖာဆန် , (Patsy ကိုခေါ်) သူတို့၏သမီးမာသဂျက်ဖာဆန် Randolph, 25 Patsy ဂျက်ဖာဆန်အတိတ်အသက်အရွယ်နေသော၎င်းတို့၏သာသူငယ် 1782. ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည် သူမအိမ်ဖြူတော်မှာအခါကသူ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအိမ်ရှင်မအဖြစ်အချိန်များတွင်ဝတ်ပြုကြ၏။ သူမနှင့် 1802 ခုနှစ်တွင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးသူမ၏ကြီးထွားလာမိသားစု, သူမ၏ဆဋ္ဌမကလေးကမွေးဖွားခဲ့သည်ပြီးနောက်တစ်နှစ် (တဦးတည်း 1795 ခုနှစ်နို့စို့အရွယ်သေဆုံးခဲ့) ။
သူမသည် 1803 မှာထပ်သွားရောက်ခဲ့ပြီး, နှစ်တွင်သူမ၏သမီးမာရိကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏သားဂျိမ်းစ် Madison Randolph, အိမ်ဖြူတော်မှာမွေးဖွားပထမဦးဆုံးကလေးသည်ဖြစ်လာခဲ့သည်ထားတဲ့ကာလအတွင်း 1805-1806 ၏ဆောင်းတွင်းကျော်တစ်ဦးတိုးချဲ့ခရီးစဉ်အိမ်ဖြူတော်မှာခဲ့ပါတယ်။
အမ်မလီ Donelson & စာရာဒွိုက် Jackson က
အင်ဒရူးဂျက်ဆန်ရဲ့ ဇနီး, ရာခေလသည် Donelson Robards Jackson ကပဲရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်သူဖွင့်လှစ်နိုင်မီ 1828 ခုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်သွား, ဒါကြောင့်သူမသမ္မတကတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူး။
ရာခေလသည်နှင့်အင်ဒရူးဂျက်ဆန်အဘယ်သူမျှမဇီဝဗေဒကလေးများခဲ့ပေမယ့်တစ်ဦးတူလေးမွေးစားခြင်းနှင့်သူ့ကိုအင်ဒရူးဂျက်ဆန်ဂျူနီယာအမည်ပြောင်းနှင့်လည်း Creek အဘိဓါန်အမွေအနှစ်တစ်ခုယောက်ျားလေးမွေးစားခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာသူမ၏တူမအမ်မလီ Donelson အိမ်ဖြူတော်တာဝန်အပေါ်ကိုယူ။ အမ်မလီရာခေလသည် Donelson Jacson ၏သမီးကြီးနှင့် 1824 ခုနှစ်, သူမ၏ပထမဦးဆုံးဝမ်းကွဲအင်ဒရူးဂျက်ဆန် Donelson လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အမ်မလီ Tennessee ပြည်နယ်အတွက်ဂျက်ဆင်စိုက်ခင်းအပေါ်တစ်ဦးအိမ်ရှင်မက The Hermitage အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောနှင့်ဖွယ်ရှိအင်ဒရူးဂျက်ဆန်ကသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအခန်းကဏ္ဍအတွက်ဝါရှင်တန်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရာခေလသည်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်သေဆုံးပြီးနောက်, ထို့နောက် 21 နှစ်ရှိအမ်မလီ, ဝါရှင်တန်သို့ပြောင်းရွှေ့နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းအင်ဒရူးဂျက်ဆန်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်အတွက်ပထမနှစ်တွင်တရားဝင်ရာခေလဂျက်ဆင်များအတွက်စိတ်မသာညည်းတွားကာလကြီးနှင့်အမ်မလီ Donelson များအတွက်အိမ်ရှင်မခဲ့ကြောင်းပထမဦးဆုံးတရားဝင်အခါသမယသူမသည် Peggy Eaton, ဘာသာရပ်မိမိကိုကုသရာတွင်သူမ၏ဦးလေးနှင့်အတူကွဲပြားနှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်ပါတီ, 1830. ခဲ့သည် တစ်ဦးအရှုပ်တော်ပုံ၏, နှင့် 1830 ခုနှစ်တွင် Tennessee ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နွေရာသီပြီးနောက်, နေသမျှကာလပတ်လုံး Peggy Eaton အိမ်ဖြူတော်၌ကြိုဆိုခဲ့သည်အဖြစ်ဝါရှင်တန်ကိုပြန်သွားဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
စာရာသည်ဒွိုက် 1831. အတွက်အဆိုပါစုံတွဲသည်အဆိုပါ Hermitage စီမံခန့်ခွဲရန်ပြန်လာသောထို့နောက်တစ်ဦးပျားရည်ဆမ်းခရီးအဖြစ် 1831 ခုနှစ်တွင်အခြို့သောအချိန်များအတွက်အိမ်ဖြူတော်မှာအသက်ရှင်အင်ဒရူးဂျက်ဆန်ရဲ့မွေးစားသားအင်ဒရူးဂျက်ဆန်ဂျူနီယာလက်ထပ်ခဲ့သည်။
1834 ခုနှစ်, အများအားဖြင့်မီးရှိဖကျြဆီးခံခဲ့ရအဓိကအိမျတျောကိုအပြီး, စာရာများနှင့်အနြေ္ဒနှင့်၎င်းတို့၏သားသမီးနှစ်ဦးပြန်အိမ်ဖြူတော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အမ်မလီ Donelson ပြန်လာသောဒါကြောင့်အချို့သောကာလအတွက်နှစ်ခုသရုပ်ဆောင်အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မရှိခဲ့သည်။ အမ်မလီ Donelson တီဘီနှင့်အတူအပြင်းအထန်နေမကောင်းဖြစ်လာပြီး, ပြီးတော့ 1836 အတွက်အသေခံပြီးနောက်စာရာအဆိုပါ Hermitage မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်တဦးတည်းမရှိခြင်းနှင့်အတူ, 1837 ခုနှစ်တွင်ဂျက်ဆင်ရဲ့သက်တမ်း၏အဆုံးအထိအခန်းကဏ္ဍသူ့ကိုယ်သူပြည့်စေတော်မူ၏။
ဂျက်ဆင်ပြီးနောက်နောက်တစ်နေ့သမ္မတလည်းသူ့ဇနီးမဟုတ်ခဲ့သူတစ်ဦးအိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မရှိခဲ့ပါတယ်။ မာတင်ဗန် Buren ရဲ့ ဇနီး, ဟန္န Hoes ဗန် Buren, သူမ၏ခင်ပွန်းရုံးကိုယူ 17 နှစ်မတိုင်မီသေဆုံးခဲ့ပါသည်။ 1841 - ဗန် Buren 1837 မှသူ၏သက်တမ်းကာလအတွင်းအရှင်တစ်မုဆိုးဖိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ရုံးထဲမှာဗန် Buren ရဲ့သက်တမ်းကာလအတွင်းမိမိသားကိုအာဗြဟံသည် (ဆာရာ) အင်ဂျလီမှာ Singleton လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကဟောင်းတဦးသမ္မတကတော် Dolley Madison တို့ကမိတ်ဆက်ခဲ့သညျ။
အသစ်သမီး-In-ဥပဒအင်ဂျလီဗန် Buren နိုင်ငံတော်သမ္မတဗန် Buren ရဲ့အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မအဖြစ်အမှုဆောင်စတင်ခဲ့သည်။ 1839 ခုနှစ်တွင်အင်ဂျလီများနှင့်အာဗြဟံသည်အင်္ဂလန်မှအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသူသူမ၏ဦးလေးသွားရောက်ခြင်းအပါအဝင်ဥရောပသွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျောပိုပြီးဧည့်သည်များနှုတ်ခွန်းများအတွက်တရားဝင်ဥရောပအကောက်ခွန်ဆောင် ခဲ့. , ဒါပေမယ့်မိရိုးဖလာအမေရိကန်များနှင့်အတူကောင်းစွာထိုင်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်စတိုင်လျင်မြန်စွာကျဆင်းခဲ့သည်။ သတို့သမီးတစ်ဦးလအနည်းငယ်အကြာတွင်ကွယ်လွန်သွားသော်လည်းအင်ဂျလီကာ, အိမ်ဖြူတော်အတွက် 1840 ခုနှစ်ဘွားမြင်လေ၏။ မာတင်ဗန် Buren နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက်သမ္မတဟောင်းနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ Kinderhook မှပြန်လာ, Re-ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်, ရုံး left ပြီးနောက်အင်ဂျလီများနှင့်အာဗြဟံသည်နောက်ထပ်ကလေးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဂျိန်း Irwin Harrison
ဂျိန်း Irwin Harrison, သမီး-In-ဥပဒသမ္မတ ဝီလျံဟင်နရီ Harrison , သူမ၏ဖခင်-In-ဥပဒရဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက်အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မအဖြစ်ခေတ္တတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏မိခင်-In-ဥပဒေ, အန္န Tuthill Symmes Harrison, DC ကရနိုင်သည်အထိသာပေါ်ဤအကြောင်းတာဝန်များကိုယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်။
သူ၏ဇနီးကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက်ရုံ 31 ရက်ကြာနေထိုင်ဝါရှင်တန်ရှိရောက်လာနိုင်မတိုင်မီသို့သော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Harrison အနိစ္စရောက်လေ၏။ Harrison ဧပြီလ 4, 1841 မှမတ်လ4မှဝတ်ပြုကြ၏။
ဂျိန်း Harrison ရဲ့ညီမဧလိရှဗက်ဝီလျံဟင်နရီ Harrison ရဲ့သားအခြားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ အဲလစ်ဇဘက်အနာဂတ်သမ္မတဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Harrison ၏မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြစ်ကိလ Cooper က Tyler
ပြစ်ကိလ Cooper က Tyler ရောဘတ် Tyler သမ္မတတစ်သားမှလက်ထပ်ခဲ့ ယောဟန်ကို Tyler သေခံတော်မူအပေါ်ဝီလျံဟင်နရီ Harrison ဆက်ခံ, 1845 မှ 1841 ကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Tyler ရဲ့ဇနီး, Letitia ခရစ်ယာန်, ချူချာခဲ့, ပြီးတော့ကသမ္မတကတော်၏မျှော်မှန်းထားခဲ့ကြသည်သောတာဝန်များကိုအများစုထွက်သယ်နိုင်ဘူး။
ထိုလူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်, သူသည်သူမ၏ဖခင်-In-ပညတ်တရားအားဖြင့်ကောင်းစွာ-ကြိုက်တယ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရခဲ့သည်နှင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးသားသူမ၏မိခင်-In-ဥပဒေ, ချူချာသူကူညီခဲ့သည်ကတည်းကပြစ်ကိလနှင့်ရောဘတ်ဂျွန်နဲ့ Letitia Tyler နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့လေသည်။
ယောဟနျသ Tyler Harrison ရဲ့သေသောနောက်ကိုယ်တော်တိုင်ကသမ္မတကိုတွေ့သောအခါသူအတွက်ခြေလှမ်းနှင့်အိမ်ဖြူတော်အတွက် Letitia ကူညီပေးဖို့, သူ၏သမီး-In-ဥပဒေ, ပြစ်ကိလမေးတယ်။ Letitia လေဖြတ်၏ရလဒ်အဖြစ်စက်တင်ဘာလ, 1842 ခုနှစ်အနိစ္စရောက်လေ၏။ Letitia Tyler အိမ်ဖြူတော်၌သေဖို့ပထမဦးဆုံးနှင့်သာသုံးပထမဦးစွာ Ladies တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
ယင်းမုဆိုးဖိုယောဟနျသ Tyler ဇွန်လတွင်ဂျူလီယာ Gardiner Tyler လက်ထပ်သည်အထိပြစ်ကိလတောင်မှအရာရှိတဦးက functions တွေတက်ရောက်ခြင်း, တစ်ဦးသမ္မတကတော်၏အိမ်ရှင်မတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်, 1844. ထိုအခါရောဘတ်နဲ့ပြစ်ကိလ Tyler Philadelphia တွင်သို့ပြောင်းရွှေ့, နှင့်သမ္မတ Tyler ရဲ့ဇနီးအသစ်သမ္မတကတော်တာဝန်များကိုယူဆ။
မာဂရက် Mackall Smith ကတေလာ
မာဂရက် (Peggy) Mackall Smith ကတေလာ, ကို Zachary Taylor ကရဲ့ သမ္မတကတော်, ကိန်းအောင်းရာအတွက်ရုံးကသူ၏တိုတောင်းသောသက်တမ်းအများစုနေခဲ့ရသည်။ သူမသည်ပုံကိုသူလုံခြုံစွာမက္ကဆီကန်အမေရိကန်စစ်ပွဲမှပြန်လာသောလျှင်လူမှုရေးဘဝအရှုံးမပေးဖို့ကတိတော်များကိုလုပ်သော, သူသူမလည်းအတန်ငယ်ချူချာခဲ့ 1848. ၏ရွေးကောက်ပွဲ၌မိမိရှုံးနိမ့်အဘို့ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူမသည်မည်သည့်သမ္မတကတော်အိမ်ရှင်မတာဝန်များကိုဖြည့်ဆည်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ တေလာသူမသည်သာနှစ်နှစ်အကြာတွင်ကွယ်လွန်သွား 1850. ၌သူ၏ရုတ်တရက်မသေမှီတိုင်အောင်သမ္မတ 1849 ဖြစ်ခဲ့သည်။
မာရိသညျတေလာ Bliss Dandridge
သူ၏ဇနီးကိန်းအောင်းရာအတွက်အခါကို Zachary Taylor က၏အကျဉ်းချုပ်ကိုသမ္မတစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏သမီးမာရိသည်တေလာ Bliss Dandridge အိမ်ဖြူတော်မှာသမ္မတကတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်အတွက်သူမ၏အချိန်ကာလအတွင်းဘက်တီ Bliss အဖြစ်လူသိများသူလူထုနှင့်အတူအတော်လေးလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
သူမ၏ဖခင်, မိခင်နှင့်ခင်ပွန်းနှစ်ဦးစလုံး Betsy 29 အခါ 1853 ဖြင့်သေလျက်, Betsy 85 ၏အသက်အရွယ်မှအသကျရှငျ, လက်ထပ်ခဲ့သည်။
အဘိဂဲလအင်အားကြီးနိုင်ငံများ Fillmore ၏ဇနီး Millard Fillmore 1853 မှသမ္မတပုံစံ 1850 သူ, ကို Zachary Taylor ကအသေခံပြီးနောက် 1850 ခုနှစ်တွင်အိမ်ဖြူတော်မှသူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အိမ်ဖြူတော်အတွက်အစောပိုင်းလများစိတ်မသာညည်းတွားတဲ့ကာလခဲ့ကြသည်။ သူမသည်သူမ၏လူမှုရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များမှာထက်အိမ်ဖြူတော်အတွက်စာကြည့်တိုက်ကိုသူမ၏အလုပ်အတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့, မကြာခဏသူတွေကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုရှောင်ရှား။ ရှည်လျားသောများအတွက်မခံမရပ်နိုင်သူကိုအဘိဂဲလ, သူမ၏အငယ်သမီး Abby အချို့လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သူမ၏အဘို့အတွက်ဖြည့်ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ဆက်ခံမယ့်သမ္မတကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာအအေးဖမ်းခြင်းနှင့်အဆုတ်ရောင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲပြီးနောက်သေဆုံးသွားတယ်။
ဂျိန်း Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းပီယပ်အဓိပ္ပာယ်
ဂျိန်း Appleton မှာနေတဲ့အကြောင်းပီယပ်လက်ထပ်ခဲ့တာအဓိပ္ပာယ် Franklin Pierce သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆန့်ကျင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သူတို့ရဲ့သားသမီးများ၏သေဆုံးမှုများအတွက်သူ၏နိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအပြစ်တင်ခဲ့ 1853 ကနေ 1857. ဖို့သမ္မတသူ။ ဂျိန်းသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အိမ်ဖြူတော်လူနေမှုဒေသများရှိတစ်ဦးတည်းသူမ၏အချိန်နေခဲ့ရသည်။ သူမသည် 1855 ခုနှစ်နှစ်သစ်ကူးဧည့်ခံမှာအပါအဝင်သမ္မတကတော်အဖြစ်အနည်းငယ်ပွဲလုပ်လေ၏။
အများအားဖြင့်, ဂျိန်းပီယပ်နှစ်ခုကိုအခြားအမျိုးသမီးမှလူမှုရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များထားခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှာသူမ၏အဒေါ်, Abby နည်းလမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြား Varina Davis က, စစ်ပွဲ၏ပီယပ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဂျက်ဖာဆန် Davis က၏မယားဖြစ်ခဲ့သည်။ (သူမ၏ခင်ပွန်းကအမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအမေရိက၏ကွန်ဖက်ဒရိတ်ပြည်နယ်များ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်သည့်အခါ Varina Davis က '' အတွေ့အကြုံကိုလျှောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ )
Harriet လိန်း (နောက်ပိုင်း Johnston) ၏တူမ ဂျိမ်း Buchanan သူမတကျိပ်တပါး၏အသက်အရွယ်မှာမိဘမဲ့ကတည်းကသူမ၏ဘွဲ့ဘထွေး၏အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်တွင်သူမ၏ညီမနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ သူစိန့်ဂျိမ်း၏တရားရုံးသို့ဝန်ကြီးအခါသူမသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှသူမ၏ဦးလေးလိုက်ပါသွားခဲ့သည်။
ဂျိမ်း Buchanan 1857 ခုနှစ်အတွက်ရုံးကိုယူသည့်အခါသူမကလူမှုရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များထွက်တင်ဆောင်လာသောအဆိုပါသမ္မတကတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်လည်းထောက်ခံအားပေးမှုအလုပ်မြားတှငျပါဝငျခွငျး။ ကျွန်စနစ်၏ပြဿနာအပေါ်သဘောကွဲလွဲတိုင်းပြည်အဖြစ်, သူမ၏အိမ်ဖြူတော်တာဝန်မျိုးအိမ်ဖြူတော်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုများအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမြို့အနီးထိုင်ဖို့ unale ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတွေကိုစီးနင်းဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာဖွေပါဝင်သည်။ သူမ၏ဦးလေးနှင့်အုပ်ထိန်းသူ 1861 ခုနှစ်တွင်ရုံးကျန်ရစ်တဲ့အခါမှာခုနစျပါးပြည်နယ်များပြီးသား seceded ပြီးမှ, Harriet Pennsylvania ပြည်နယ်သခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါသွားလေ၏။ သူမသည် 1866 ခုနှစ်တွင်ဟင်နရီ Elliott သည် Johnston လက်ထပ်ခဲ့သည်။
Eliza McCardle ဂျွန်ဆင် & မာသဂျွန်ဆင်ပက်
အင်ဒရူးဂျွန်ဆင် သူမ၏ခင်ပွန်းရုံးကိုယူသည့်အခါ '' s ကိုဇနီး Eliza တီဘီနှင့်အတူမကျန်းမမာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဟာ 1865 ကနေ 1869. Eliza ဂျွန်ဆင်သည်သူ၏နိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများစုမှတဆင့်အများပြည်သူမျက်စိရှောင်ရှား, သာနှစ်ကြိမ်သမ္မတကတော်အိမ်ရှင်မစွမ်းရည်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖို့သမ္မတဖြစ်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းဟာဝိုင်ယီရဲ့ဘုရင်မမင်းသမီး Emma (1866) entertaining ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အခြားသူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ 1867 မွေးနေ့အားဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ များစွာသောလူမှုရေးအခါသမယအပေါ်သူ့အဘို့အစားသူမ၏သမီးမာသဂျွန်ဆင်ပက်ခဲ့ပါတယ်။
Chester အာသာရဲ့ အာသာလုပ်ကြံခံရသမ္မတ James Garfield အောင်မြင်ခဲ့မတိုင်မီဇနီး, Ellen Lewis က Herndon အာသာ, ထိုနှစ်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ခဲ့သည်။ 1885 - Chester Arthur 1881 ကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အာသာမိမိသမီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်ဝါရှင်တန်လာရန်မိမိနှမတောင်းလည်း Ellen အမည်ရှိနှင့်ခေါ်တော်မူအခန်းကဏ္ဍအတွက်အစေခံရန် "အိမ်ဖြူတော်၏သခင်မ။ " မာရိ McElroy, သားသမီးလေးယောက်တစ်ဦးက New York စီးပွားရေးသမားမိခင်မှလက်ထပ် ယူ. အိမ်ဖြူတော်တာဝန်အချို့ကိုကျော်ပေမယ့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်မည်သူမဆိုလူသိရှင်ကြားသူ့ဇနီးမပြည့်စုံကြလိမ့်မည်ဟုအခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူရှိသည်ဖို့တွန့်ဆုတ်ခဲ့သညျ။ သူမသည်ဆောင်းတွင်းကာလအတွင်းဝါရှင်တန်ရှိမှသာအလုပ်အများဆုံးလူမှုရေးအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျူလီယာ Tyler, ယောဟန် Tyler ၏ဇနီးနှင့် Harriet လိန်း, ယာကုပ် Buchanan ၏တူမ: သူမသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏နှစ်ခုဟောင်းတဦးပထမဦးစွာ Ladies ကူညီရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမ၏အစ်ကိုရဲ့သမ္မတသက်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာအဓိကဖြစ်ရပ်သည်, သူမ 48 နဲ့အခြားအရာရှိများသမီးတို့နှင့်ဝါရှင်တန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်များသူမ၏ကူညီရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။
နှင်းဆီကလိဗ်လန် & Frances Folsom Cleveland
Grover Cleveland သူ 1885 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်တဲ့အခါမှာလက်ထပ်မဟုတ်ခဲ့, သူသည်သူ၏ပထမဆုံးသက်တမ်းကာလအတွင်းရုံးရှိနေစဉ်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူဟာ 1885 ကနေ 1889 နှင့် 1893 မှ 1897 မှသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မိမိနှမ, နှင်းဆီ (Libby) Cleveland, ရုံး၌သူ၏ပထမဦးဆုံးတဆယ်လကြာသမ္မတကတော်တာဝန်များကိုနေထိုင်ပြီးထွက်သယ်ဆောင်ရန်အိမ်ဖြူတော်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်လူမှုရေးအိမ်ရှင်မဖြစ်ခြင်းမှဉာဏရေးရာပိုမိုနှစ်သက်ပေမယ့်သူမ၏အစ်ကို၏မျက်နှာကို ထောက်. အိမ်ဖြူတော်မှာဖျော်ဖြေရေးဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Grover Cleveland 1886 ခုနှစ် Frances Folsom လက်ထပ်သည့်အခါနှင်းဆီကလိဗ်လန်ပညာရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှအငြိမ်းစားနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့် " ဘော်စတွန်လက်ထပ်ထိမ်းမြား Evangeline Marrs Simpson နှင့်အတူ" ။
Frances Folsom Cleveland အိမ်ဖြူတော်မှာလက်ထပ်, အသက် 21 မှာသမ္မတကတော်ထိုင်လျက်အငယ်ဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်အများအပြားကြိုဆိုဧည့်ကျင်းပအများကြီးစာနယ်ဇင်းစိတ်ဝင်စားဘာသာရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Cleveland လေးနှစ်အကြာတွင်ပြန်အိမ်ဖြူတော်သို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့, သူ့ပထမသက်တမ်း၏အဆုံးပြီးနောက်နယူးယောက်စီးတီး၌နေ၏။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းသမ္မတစဉ်ကလေးမွေးဖွားပေးစေခြင်းငှါလည်းပထမဦးဆုံးသမ္မတကတော်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မာရိသညျဖြစ်သူ Scott Harrison McKee
ကယ်ရိုလိုင်း Lavinia ဖြစ်သူ Scott Harrison ၏ဇနီးဖြစ်ခဲ့သည် ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Harrison Grover Cleveland ၏ဝေါဟာရနှစ်ခုကိုအကြား, 1889 ကနေ 1893 သည်အထိသမ္မတသူ။ ကယ်ရိုလိုင်း Harrison တီဘီနှင့်အတူတစ်နှစ်ကြာစစ်တိုက်ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ 1892 ခုနှစ်သူမသေဆုံးခင်အထိတက်ကြွစွာသမ္မတကတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမ၏သမ္မတကတော်နှစ်အတွင်းမှာတော့သူမအမေရိကန်တော်လှန်ရေးရဲ့သမီးကိုတွေ့ကူညီပေးခဲ့သည်။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကညည်းတွားကာလအဆုံးသတ်သောအခါ, Harrison ရဲ့သမီးမာရိသညျ McKee သည်သူ၏သက်တမ်း၏နောက်ပိုင်းတွင်လကြာသမ္မတကတော်အဖြစ်တိုးမြှင်။ သူသည်မိမိဇနီး၏တူမ, မာရိသခင်ဘုရား Dimmick နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်အခါ General Electric ကုမ္ပဏီ၏တည်ထောင်သူလက်ထပ် McKee, အကြာတွင်သူမ၏ဖခင်ထံမှရိုင်းစိုင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည်သူတို့၏မင်္ဂလာပွဲသို့တက်ရောက်ရန်မနောက်တဖန်သူမ၏ဖခင်အားမိန့်ဘယ်တော့မှခဲ့ပါဘူး။
Ida Saxton McKinley & Jenny Tuttle ဟိုဘတ်
Ida Saxton McKinley, 1897 ကနေ 1901 ၌သူ၏လုပ်ကြံခံရသည်အထိသမ္မတသူက William McKinley ၏ဇနီး, စိတ်ကျရောဂါ, phlebitis နှင့်သေသောနောက်, အချိန်တိုတောင်းတဲ့သက်တမ်းအတွက်သူမ၏မိခင်နှင့်သူမ၏နှစ်ခုသာသားသမီးများ၏ဝက်ရူးပြန်ရောဂါတီထွင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ပုဂ္ဂလိကမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, တစ်ဦးမှာမမှန်ကန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သမ္မတကတော်အဖြစ်, သူမ၏အခွအေနေအများပြည်သူပွဲအန္တရာယ်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမ၏ခင်ပွန်း protocol ကိုတောင်းဆိုမယ်လို့အဖြစ်သူမ၏ပြည်နယ်ညစာစားပွဲမှာထက်စားပွဲ၏အခြားအဆုံးမှာသူ့ကိုအနားမှာထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ လက်ခံရရှိလိုင်းများရှိခဲ့သည်သည့်အခါတခြားလူတိုင်း၌ရပ်လျက်နေစဉ်တွင်သူမသည်ထိုင်ခဲ့သည်။ သူမကသူမ၏အဘို့အအရှက်ရှောင်ရှားရန် nonchalant သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူကသူမ၏မျက်နှာအပေါ်တစ်ဦးလက်သုတ်ပဝါကိုနေရာချလိမ့်မယ်။
ဒုတိယသမ္မတ Garret ဟိုဘတ်၏မယားအဖြစ် Jenny Tuttle ဟိုဘတ်, "ဒုတိယအသမ္မတကတော်" 1899. ခုနှစ်တွင်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့မသေမှီတိုင်အောင်အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မတာဝန်များအများအပြားထွက်သယ်ဆောင်သူမလည်း Ida McKinley ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတ 1901 ခုနှစ်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည့်အခါ , Jenny ဟိုဘတ်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်အနီးတွင်ဖြစ် Buffalo မှခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။
ဟယ်လင် Herron Taft
ဟယ်လင် Herron Taft မှလက်ထပ်ခဲ့ ဝီလျံအဒမ်စ သူ 1909 ကနေ 1913 ခုနှစ်မှသမ္မတဖြစ်ခဲ့သည်သူမကထက်နည်းနှစ်လအတွက်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲပြီးနောက်လေဖြတ်ခံစားခဲ့ရနှင့်သူမ၏ညီအစ်မလေးယောက်အိမ်ဖြူတော်တာဝန်များအတွက်သူမ၏နဲ့ဖြည့်သည့်အခါ။ သူမသည်သမ္မတကတော်အဖြစ်တာဝန်များကိုပြန်လည်စတင်ဖို့တစ်နှစ်အကြာတွင်လုံလုံလောက်လောက်ရပြန်လေ၏။ သူမသည်ပါလီမန်အဆောက်အနှင့်ဒီရေဝှမ်းပတ်လည်ရှိချယ်ရီပင်အဘို့အောက်မေ့နှင့်ဂျပန်သံအမတ်၏ဇနီးနှင့်အတူပင်ပျို၏ပထမဦးဆုံးကိုစိုက်ပျိုးသည်။
Ellen Axson Wilson က, ဟယ်လင် Woodrow အရိုး & Edith Bolling Galt Wilson က
Woodrow Wilson ရဲ့ ပထမဇနီး, Ellen Axson Wilson က, သြဂုတ်လအတွင်းကသူမသေဆုံးခင်အထိသမ္မတကတော်ခဲ့ 1914 Wilson ကသူမသေဆုံးမီက 1911 ကနေအဖွဲ့ကို 1919 မှသမ္မတအဖြစ်ဝေါဟာရနှစ်ခုကိုဝတ်ပြု Ellen Wilson ကသူတို့သမီးနှစျယောကျ၏မင်္ဂလာဆောင်ကြီးကြပ်။ Ellen တောက်ပရဲ့ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ပထမဆုံးဝမ်းကွဲ, ဟယ်လင် Woodrow အရိုး, အိမ်ဖြူတော်အိမ်ရှင်မအဖြစ်တိုးမြှင်။
ဟယ်လင်အရိုး Edith Bolling Galt, မုဆိုးမတစ်ဦးမှသူမ၏ဝမ်းကွဲမိတ်ဆက်နှင့် Wilson နဲ့ Galt မကြာမီ Romantic နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သူကဒီဇင်ဘာလ 1915 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ဝါရှင်တန်အိမ်မှာသူမရဲ့လက်ထပ်နှင့် Edith Bolling Galt Wilson ကသမ္မတကတော်၏အခန်းကဏ္ဍကိုယူဆ။
အချို့ကအောက်တိုဘာလ 1919 ခုနှစ်တွင် Woodrow Wilson ရဲ့လေဖြတ်ပြီးနောက်သူမ၏ခင်ပွန်း၏သူမ၏ထောက်ခံမှုသူ့ကိုသူ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအင်အားကြီးအချို့ကျင့်သုံးသူမ၏ပမာဏ, ထိုအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ 1921 - မိမိသက်တမ်း 1913 ကနေဖြစ်ခဲ့သည်။
တရားဝင်ဇန်နဝါရီလ 20, 2017 တွင်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ကိုယူ Melania Trump, ဒုတိယနိုင်ငံခြားဖွားသမ္မတကတော်, သူမမှသူမအလိုဆန္ဒကိုးကားပြီးဇွန်လ 11, 2017 သည်အထိ Trump Tower တွင်နယူးယောက်စီးတီးရှိသူမ၏နေအိမ်ကနေအိမ်ဖြူတော်မှမရွှေ့ခဲ့ဘူးနေစဉ် သူမ၏သား Barron နယူးယောက်စီးတီးရှိကျောင်းတစ်နှစ်ဖြည့်စွက်ရှိသည်။ သူမသည်ပေါ်တွင်မတ်လ 8, 2017 သည်အထိတစ်ဦးအိမ်ဖြူတော်ဖြစ်ရပ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမပြုခဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့နေ့ ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Trump ၏သမီး, Ivanka Trump, ရံဖန်ရံခါသူမ၏ဖခင်များအတွက်လူမှုရေးအိမ်ရှင်မအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မာရိသက Parker Follett Quotes
သမိုင်း၏ထိပ်တန်း 100 အမျိုးသမီးများနေ့
ယိုကိုဟားမား Avid Ascend Long-Term ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
တရုတ် Chainsaw ကိစ္စများ
KRAUS - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း
အဆိုပါ Coliseum: Edgar Allan ဖိုးရဲ့ကဗျာဟာလုံ Ampitheatre အကြောင်း
Sparta ၏ Gorgo
5 လြယ္ကူခြေလှမ်းများအတွက် Backflip သလားလုပ်နည်း
အဆိုပါဒေါငှက်အကြောင်း 10 အချက်အလက်
၏အဓိပ်ပာယျ '' Vive La ပြင်သစ်! '
အဆိုပါအများစုမှာ Shock Reality TV ကိုပြိုကွဲ
'' The Black Cat '- Edgar Allan ဖိုးအားဖြင့်က Short Story
Srixon Z ကို 355 ဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်: ယာဉ်မောင်း, Fairways နှင့် hybrid, Plus အားသံ
John C. Calhoun: သိသိသာသာအချက်အလက်နဲ့အကျဉ်းအတ္ထုပ္ပတ္တိ